Nubia Red Magic 6 ga - ewepụta na Machị 4 | Gam akporosis
Nubia Red Magic 6 ga-amalite na March 4 na 66W ngwa ngwa
N'ime izu ole na ole, anyị ga-anabata gị na ama egwuregwu ọhụụ, nke a ga-ewepụta dị ka Nubia Red Magic 6 na dị ka leaked n'oge na-adịbeghị, ọ ga-abata na mobile ikpo okwu Qualcomm si Snapdragon 888.
Ọnụahịa ahụ nwere ụbọchị ịhapụ ya, ọ dịkwa Machị 4. N'ụbọchị ahụ, anyị ga-amata ekwentị zuru ezu, na mgbakwunye na ịbụ nke nke Ezigbo GT 5G.
Kedu ihe anyị maara banyere Nubia Red Magic 6 ruo ugbu a?
Ni Fei bụ osote onye isi Nubia. Nke a bụ ọrụ maka ọkwa na mwepụta nke Red Magic Magic posta. Nke a ekpughela ụbọchị mbido nke arụmọrụ dị elu, nke bụ nke anyị kwuru ugbu a: Machị 6.
Na post Fei, nke emere site na Weibo, ekpughere na Red Magic 6 ga-abịa na "teknụzụ kachasị ọsọ anọ." Mpempe akwụkwọ nke onye isi ụlọ ọrụ na-agụnye akara ngosi anọ n'okpuru ụgbọ ala agba ọsọ, ikekwe na-anọchite anya ngosi HDR, teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa, nzaghachi mmetụ ka mma, na onye na-ajụ oyi maka ịrụ ọrụ ogologo oge nke egwuregwu.
Nubia nke Red Magic 6 ga-ahapụ ya na a 66W ngwa ngwa odori technology. Ihe dị iche iche nke Pro, n'aka nke ọzọ, ga-egosipụta ngwa ngwa ngwa ngwa nke 120 W. Ngwaọrụ ahụ, dị ka ihe dị iche iche dị elu karị, a na-atụ anya ịbịa na Snapdragon 880 mobile platform, ọ bụ ezie na a na-ekwu na enwere ike ịmalite nke a na Snapdragon 870, na-ahapụ Snapdragon 888 SoC ahụ e kwuru n'elu maka nwanne ya nwoke nke okenye. Nke a bụ ihe anyị ga-achọpụta ma emechaa.
Ihuenyo ekwentị ga-enwe ume ọhụrụ dị elu nke 144 Hz. Agbanyeghị, ụfọdụ akụkọ na-egosi na ọ ga-abụ 120 Hz, na-ahapụ 144 Hz maka Pro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 6 ga-amalite na March 4 na 66W ngwa ngwa
Samsung nwere ike ịlaghachi na Wear gam akporo na smartwatches ya
Otu mmelite UI 3.1 maka Galaxy S20 FE laghachiri